လူသိနည်းသော သပိတ်ဖုတ်ခြင်း – Tameelay
သပိတ်ဖုတ် တာ သိပ်မမြင်ဖူးကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ မြင်ဖူးအောင် …….
လူတော်တော်များများ က ဘုန်းကြီး အလုပ်က ဘာမှ မရှိဘူး ထင်ကြတယ်……
ဒါတွေက မြတ်စွာဘုရားရှင် နှစ်ခြိုက်တော်မူတဲ့ ရဟန်း တို့ တတ်အပ်တဲ့အတတ်တွေပါ …..
Credit >>> Hla Min
သပိတျဖုတျ တာ သိပျမမွငျဖူးကွတဲ့လူပုဂ်ဂိုလျတှေ မွငျဖူးအောငျ …….
လူတျောတျောမြားမြား က ဘုနျးကွီး အလုပျက ဘာမှ မရှိဘူး ထငျကွတယျ……
ဒါတှကေ မွတျစှာဘုရားရှငျ နှဈခွိုကျတျောမူတဲ့ ရဟနျး တို့ တတျအပျတဲ့အတတျတှပေါ …..
သင် ဒီ (၅) မျိုးနဲ့ လုံးဝလုံးဝ အတူတူ မအိပ်ပါနဲ့…! (အရေးကြီးလို့ပါ အိပ်မိရင်တော့ ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ်ပါပဲ )
အတူတူမအိပ်သင့်တဲ့ အရာ (၅) မျိုး ၁. နာရီဝတ်ပြီး မအိပ်ပါနဲ့.. နာရီဟာရေဒီယိုသတ္တိကြွထုတ်လွှင့်မှုအတော်မြင့်မားပါတယ်… နာရီဟာသေးငယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ၀တ်ဆင်ပြီး အချိန်ကြာကြာ အိပ်ခဲ့ရင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်တဲ့…. ဒါကြောင့်အိပ်တဲ့အခါ နာရီကို ချွတ်ပြီးအိပ်ကြပါ.. ၂. အမျိုးသမီးများ ဘရာဝတ်ပြီး မအိပ်ပါနဲ့ အမေရိကားမှ ပညာရှင်များလေ့လာတွေ့ရှိချက်အရအမျိုးသမီးများ ၁၂နာရီထက်ကျော်လွန်ပြီး အတွင်းခံ(ဘရာ)ကိုဝတ်ဆင်ပါကရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ …
အရပ် ၅ပေ ၄လက်မအောက်ရောက်တဲ့သူတွေကို အရပ်ပုသူတွေလို့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာမှ ၅ပေ အတိသာ ရှိတဲ့သူတွေ၊ ၅ပေ ၁လက်မလောက်ပဲရှိတဲ့သူတွေ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုရှိရင်းစွဲအရပ်ထက် ပိုမြင့်သယောင် ဖြစ်စေဖို့ အ၀တ်အစားပိုင်းကို ဂရုစိုက်ဝတ်ဆင်ကြရတော့မှာပေါ့။ ဒီတော့ ဖက်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့တွေ သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကို အမေးအဖြေပုံစံ ရေးသားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ကျွန်မအရပ်က ငါးပေ …
ကလေးများနဲ့ အနီးကပ်မှာရှိပီး သတိမမူမိတဲ့ အဆိပ်” တာဝန်သိတဲ့ ကျမကတော့ မျှဝေပေးလိုက်ပါပြီ
ကလေးများနဲ့ အနီးကပ်မှာရှိပီး သတိမမူမိတဲ့ အဆိပ်”’ ဟိုနေ့က ကလေးဆေးရုံမှာစာသွားသင်တဲ့ အမနောက်လိုက်ပီးကိုယ်တွေ ပြန်လာတော့ FA ညီမလေးကလာပြောတယ် ‘ အမရေ အသက်က ၂နှစ်ခွဲနဲ့ ကလေးလေး Paracetamol overdose နဲ့ NA အသစ်လေး ရောက်လာတယ် ‘ အဲ့တော့ကိုယ့်မယ် ‘ ဟယ် …